Izindaba - Ukuvakashelwa Kweklayenti LaseCongo Lokugcwalisa Umshini
Umshini Wokugcwalisa Amanzi
Umshini Wokugcwalisa Amanzi Namanje
Umshini wokugcwalisa amanzi okhazimulayo
Umshini Wokugcwalisa Amanzi Amabhodlela Engilazi
Umshini wokugcwalisa amanzi wamabhodlela we-PET omncane
Umshini Wokugcwalisa Amanzi we-3-5L
5 Umshini Wokugcwalisa Amanzi weGallon
Umshini Wokugcwalisa Isiphuzo
umshini wokugcwalisa iziphuzo ezithambile
Umshini wokugcwalisa iziphuzo ezingekho kaboni
Umshini wokugcwalisa isiphuzo samandla
Umugqa Wokugcwalisa Hot Hot
Umugqa womshini wokugcwalisa ijusi lamabhodlela we-PET
Umshini Wokugcwalisa Utshwala Bewayini
Umshini Wokugcwalisa Umbhodlela Wengilazi
Umugqa womshini wokugcwalisa i-Glass Bottle Liquor
Umugqa Wokugcwalisa Amafutha Umugqa
Ulayini womshini wokugcoba uwoyela
Umugqa womshini wokugcwalisa uwoyela obalulekile
Ukwelashwa kwamanzi ne-Pasteurizer
uhlelo lokwelashwa kwamanzi
I-Pasteurizer & Sterilizer
Umshini wokugcwalisa ukudla
Umugqa Wokugcwalisa Uju Lomshini
Umuthi Wokugcwalisa Imithi
Isiraphu Ukugcwalisa Umshini
Umshini Wokugcwalisa Izimonyo
Umugqa Wokugcwalisa Umshini We-Shampoo
Umshini Wokugcwalisa Amakhemikhali
Umshini Wokugcwalisa Indebe Yamakhemikhali
Okuzenzakalelayo Linear Capping Machine
Okuzenzakalelayo Cap Loader Machine
I-Round Bottle Sticker Labeler HAY Series
Uchungechunge Lomshini Welebula Wokunamathela Okuphezulu we-HAP
I-Front and Back Side Labeler ine-Series
Lungisa i-Position Sticker Labeler HDY Series
Uchungechunge lwesitaki se-Horizontal HAW Series
Ukuvakashelwa Kweklayenti LaseCongo Lokugcwalisa Umshini
Ngesikhathi se-2nd China International Expo Expo ngoNovemba, ithimba lase-2019 lase-Afrika lifika eShanghai lisuka eCongo, eNingizimu Afrika. Abanikazi bavakashele futhi bahlola imishini abayifunayo, imboni yethu ingumhlinzeki wemishini yokugcwalisa ukhiye esimisweni sabo.
Thina, iHigee Machinery, umphakeli osuselwe ekukhiqizeni, onolwazi olucishe lube yiminyaka engama-20 emkhakheni wokugcwalisa, ukufaka amakhebuli, ukufaka amalebula nokupakisha umugqa womshini wohlobo oluhlukile lwemikhiqizo. Singabanikezeli besixazululo sokugcwalisa umugqa abaqeqeshiwe. Ohambweni lwabo lwebhizinisi, ikhasimende lethu lathintana nohlelo lwangaphambi kokwelashwa kwamanzi, kufaka phakathi isihlungi se-quartz sand, isihlungi esisebenza nge-carbon, uhlelo lwe-RO, i-Ozone sterilizer, ithangi lamanzi. Futhi baphinde bahlola ukusebenza komugqa wethu we-3 koku-1 we-monoblock cola, ukugcwalisa nokufaka umshini womshini. Ekugcineni siba nomhlangano mayelana nokuthengisa ngemuva, usuku lokuthumela, isikhathi sokukhokha kanye nemakethe ngokuthengisa ulayini wamanzi asemabhodleleni e-Afrika.
Kukhona ucezu lwezindaba ezivela ethimbeni lase-Afrika eCongo lokuthi uhulumeni uyenqabela umenzi emakethe yendawo ukuthi akhiqize amanzi e-sachet.
Umshini wokugcwalisa nokupakisha amanzi we-Sachet ungumkhiqizo oshisayo kwezinye izindawo zase-Afrika manje.Kodwa kudingeka bacabange ngokusungula umugqa omusha wokukhiqiza amanzi asebhodleleni ngokuzayo.
Ithimba lase-Afrika lithole umshini ofanele, lijabulela ukudla kwaseChina, libuka ukuhlolwa komshini. Banikeza ukuncoma okuphezulu ekulungisweni kwethu okuhle kanye nesipiliyoni sokuphatha i-5S ngenkathi bevakashela indawo yethu yokusebenzela, igumbi lokuhlangana, umnyango wezokukhiqiza, indawo yokugcina impahla nokuphatha indawo. Siyaziqhenya ngekhwalithi yethu yokukhiqiza futhi siyakwazisa ukubambisana komunye nomunye. Imishini yeHigee, ukukhetha kwakho okuhle kuzo zonke izinhlobo zesiphuzo, isiphuzo namanzi okugcwalisa ukufaka, ukufaka ilebula nomugqa wokupakisha. Siyakwamukela Kusivakashele! Sihlala silapha sikulindile!
Isikhathi Iposi: Dec-18-2019
IHigee Machinery (Shanghai) Co., Ltd.
Imibuzo mayelana nemikhiqizo yethu noma pricelist, sicela ushiye ikheli lakho kithi thina sizothintana emahoreni angu-24.
© Copyright - 2010-2021: Wonke Amalungelo Agodliwe.
Hit enter ukusesha noma i-ESC ukuze uvale